Title: Myanmar Companies Law (Pyidaungsu Hluttaw Law 29/2017) - မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ
Language: Burmese (မြန်မာဘာသာ) English (draft)
Title: Myanmar Companies Law (Pyidaungsu Hluttaw Law 29/2017) English
Title: Supplementary State Budget Law (Pyidaungsu Hluttaw Law 28/2017) - ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေ
Title: Irrigation Law ( Pyidaungsu Hluttaw Law 27/2017) - ဆည်မြောင်းဥပဒေ
Title: Communications Law (Pyidaungsu Hluttaw 26/2017)-ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Christian Marriage Act (Pyidaungsu Hluttaw Law 25/2017) -ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Guardianship Law (Pyidaungsu Hluttaw Law 23/2017) - အုပ်ထိန်းသူနှင့်အုပ်ထိန်းခြင်းခံရသူများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Myanmar Divorce Law (Pyidaungsu Hluttaw Law 24/2017) - မြန်မာနိုင်ငံလင်မယားကွာရှင်းရေးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Dam Law (Pyidaungsu Hluttaw Law 22/2017) - တာတမံဥပဒေ
Title: Age of Marriage Act (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21/2017) - အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Petrochemicals Act (Pyidaungsu Hluttaw Law 20/2017) - ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
Title: Myanmar Stamp Act (Pyidaungsu Hluttaw Law 19/2017) - မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
Title: Myanmar Anti-Corruption Law - 3rd amendment (Pyidaungsu Hluttaw Law 18/2017) - အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပေ�
Title: The Tax Amendment Act (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 17/2017) - အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
Title: Transferred Persons (Pyidaungsu Hluttaw 16/2017) - တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဥပဒေ
Title: Inland Water Transport (Pyidaungsu Hluttaw Law 13/2017) - ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ဥပဒေ
Title: Myanmar Maritime Boundaries and Zones Laws (Pyidaungsu Hluttaw 14/2017) - မြန်မာနိုင်ငံ ပိုင်နက်ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ဇုန်များဥပဒေ
Title: Oil Well Laws (Pyidaungsu Hluttaw 15/2017) - ရေနံလက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
Title: Maintenance of Rivers and Water Sources (Pyidaungsu Hluttaw 11/2017) - ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သ�
Title: Public Accountants Default Act (Pyidaungsu Hluttaw Law 12/2017) - ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များပျက်ကွက်မှု အက်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ
Title: Coastal and Inland Waterway Enterprises Law (Pyidaungsu Hluttaw 10/2017) - မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး�
Title: 2017- Water and Dam Tax Law (Pyidaungsu Hluttaw 9/2017) - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ရေခွန်နှင့် တာတမံခွန် ဥပဒေ
Title: Amendment of legal [Additional] Law (Pyidaungsu Hluttaw 8/2017) - ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: 2017-2018 - Nation Budget Law (Pyidaungsu Hluttaw 6/2017) - ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ
Title: 2017-Department of Allocation Budget Law (Pyidaungsu Hluttaw 7/2017) - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ
Title: Law Amending the commission for translating laws (Pyidaungsu Hluttaw Law 1/2017) - ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ